နေအိမ် - NYE Countdown.com
19 $ သင်၏လူမှုရေးမီဒီယာရောနှောမှုပြသရန်အတွက် အခုချပါ အော်ဒီယိုနှင့်ဗီဒီယို (reg ။ $ 49 ea ။ ) တစ်ခုတည်းသော DJ DROPS စိတ်ကြိုက် သင်၏လူမှုရေးမီဒီယာရောနှောမှုပြသရန်အတွက် အခုချပါ အော်ဒီယိုနှင့်ဗီဒီယို အော်ဒီယိုနှင့်ဗီဒီယို (reg ။ $ 49 ea ။ ) DJ DROPS တစ်ခုတည်းသော $9 $9 DJ DROPS စိတ်ကြိုက် စိတ်ကြိုက်
သောကြာနေ့အထိ NYE LAUNCH စတင်ထွက်ခွာမည်
Audio Drops၊ DJ Drops (အထုပ်အပိုးများ)
ဝယ်ယူသောခြောက်သွေ့သောကောက်နုတ်ချက်သည်4အခမဲ့ထုတ်လုပ်သည်။
$295.00 $76.00 ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
စိတ်ကြိုက် CELEBRITY Dj Drops [ထုတ်ကုန် - အသံ]
$99.99 $35.00 ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
စိတ်တိုင်းကျ DJ Drops [Dry-Audio]
$49.99 $19.00 ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
စိတ်တိုင်းကျ DJ Drops [ထုတ်ကုန် - အသံ]
$99.99 $26.00 ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
၁၀၂ ကြိုတင်ထုတ်လုပ် DJ သမားခုန်ခြင်း + အပိုဆုများ! [လက်ငင်း download လုပ်]
$79.99 $29.99 စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်
Bundle PAK မှာဗီဒီယိုလေးချပါ။
$449.00 $147.00 စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်
ကလပ် Quarantine [ဗီဒီယိုထုံးစံ]
$99.00 $49.00 စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်
Social Party DJ Opener [ဗီဒီယိုထုံးစံ]
$99.00 $49.00 ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
၃ … ၂ … ၁ …
သင်၏ DJ AUDIO DROPS သို့မဟုတ် CUSTOM VIDEO DROPS ကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါ။
Dj Drops အားလုံး -“ Dry” သို့မဟုတ်“ Produced” အားလုံးသည် ၁၀၀% စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။
မင်းရဲ့ script ကမင်းလိုချင်တာကိုပြောနိုင်တယ်။
မှာယူရန် SHOP ကိုနှိပ်ပါ၊ မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါ၊ သင်၏ပုံစံကိုဂျေဂျင်စာရင်းအောက်ရှိအမှာစာထဲ၌စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ။
သင့်ရဲ့ Download ကို
တရားဝင် NYE Countdown 2021 နှစ် ၂၀ ကျော် DJ နှင့် Nightclub စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အစွမ်းအစဆုံးနှစ်သစ်ကူးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ DJ's, Nightclubs နှင့်အခြား it ည့်ဝတ်ကျေပွန်သည့်နေရာများသည်ဖောင်းပွမှုနှင့်မည်သည့်အရွယ်အစားရှိလူစုလူဝေးနှင့်အတူရူးသွပ်သောစွမ်းအင်များဖန်တီးပုံကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ တရားဝင် NYE Countdown 20 ထုတ်လုပ်သူများသည် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းကတည်းက DJs နှင့် nightclub / စားသောက်ဆိုင်မန်နေဂျာများဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်အတောအတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစျေးကွက်နှင့်နေရာများစွာ၌တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်သတိပြုမိခဲ့ကြရာနှစ်သစ်ကူးအကြိုညသန်းခေါင်ယံ၌လူအများနှင့်ဖောက်သည်များသည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။
ပထမ ဦး စွာသူတို့သည်လေးမိနစ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည် "NYE စိတ်ကြိုက် Countdown" in အသံပုံစံ. ထို့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် ၄ င်းတို့သည်ချီးကျူးဖွယ်ကောင်းသော 4K၊ ဗီဒီယိုရေတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်နှစ်သစ်ကူးအကြိုအဖြစ်အပျက်များပြောင်းလဲခြင်း။
တရားဝင် NYE Countdown 2021 ကို DJ နှင့်နေရာအမည်များကိုပညာရှင်ပီသစွာဖော်ပြခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ countdown အတွင်းရှိစီးပွားရေးအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။
NYE Countdown ကအံ့သြစရာကောင်းအောင်ဖန်တီးပေးတယ် “ တစ်ညလုံးပါတီ” ဘားမှာအမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်ဖို့လူအစုအဝေးကခုန်, စေ့စပ်နှင့်လမ်းညသန်းခေါင်၏လေယာဉ်ဖြတ်ကျော်လမ်းသောက်သုံးစောင့်ရှောက်သောနေရာများမှာစွမ်းအင်!
တရားဝင် NYE Countdown 2021 ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်လုပ်သည့် Disc Jockeys၊ Mobile DJs၊ VJ သို့မဟုတ် Video Jockeys, Nightclubs, Bars, Radio Stations, Casinos, Hotel chains, Resorts, Record Pool, Entertainment Venues နှင့် Worldwide မှထုတ်လုပ်သည်။
တရားဝင် NYE Countdown ကို4ဘာသာဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
အင်္ဂလိပ်, ESPAÑOL, Français & Deutsche.
os Nosotros hablamos español! Haga clic en“ တိုက်ရိုက်စကားပြောခန်း”
အရည်အသွေး: 4K, 2K တွင်လာသည်။ 1080p သို့မဟုတ် 720p (* စိတ်ကြိုက်ရရှိနိုင်)
ကြာချိန်4မိနစ် (* သို့မဟုတ်ထုံးစံအတိုင်း)
FORMAT: Dj Video software အားလုံးနှင့် DVD / Blu Ray Players အားလုံးနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။
အသုံးပြုသူ: သင်၏နာမည်နှင့်ကလပ် / အဖြစ်အပျက်ကိုပညာရှင်ဆန်စွာဖော်ပြပြီးသင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုသင်၏ရေတွက်ခြင်းအတွင်း၌အများဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ထည့်သွင်းပါမည်။
ပို့ဆောင်ခြင်း: NYE COUNTDOWN အမိန့်အားလုံးသည်သင်၏နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်မတိုင်မီသို့မဟုတ်အခမဲ့ဖြစ်သည်အထိမကယ်မနှုတ်မီ ၁၀၀% အာမခံထားသည်။
Facebook မှာ-, f
မူပိုင်ခွင့်ရယူထားသည်။ © 2020 NyeCountdown.com, llc ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုမူပိုင်ခွင့်တေးဂီတမရှိဘဲထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လိုင်စင်ရဂီတတွင်ရောစပ်ရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် DJ အတွက်စိတ်ကြိုက်အသံထွက်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်တင်းပလိတ်များကိုသာပေးသည်။ နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲအပါအ ၀ င်တေးဂီတပါအကြောင်းအရာအားလုံး၊ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်သာမြှင့်တင်ရေးနှင့်သရုပ်ပြခြင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖြစ်သည်။